China chimumumu maindasitiri centrifugal mvura evaporative mhepo inotonhorera XK-20S fekitori uye vanotengesa | XIKOO
XK-20S mbeveve maindasitiri centrifugal mvura evaporative mweya inotonhorera ndiyo inonyanya kufarirwa maindasitiri centrifugal mweya inotonhorera. Uye kune kumusoro, pasi, padivi mhepo kuburitsa kuti ive nyore kuiswa pamadziro, padenga uye nedzimwe nzvimbo.Inoshanda kutonhodza 60-80m2 chirimwa munzvimbo ine hunyoro uye 150-200m2 chirimwa munzvimbo yakaoma.
XK-20S mbeveve maindasitiri centrifugal mvura evaporative mweya inotonhorera yakarongedzwa nemaindasitiri emhando zvikamu, uye vane pazasi mafekitori:
• LCD pani + kure kure, 12 mhepo inomhanya. voltage / yazvino yakavhurika chikamu dziviriro, pamusoro-pari zvino dziviriro, pamusoro pemagetsi kudzivirira, kushomeka kwemvura kudzivirira-ion uye yakazara-otomatiki dhiraini basa. Nyore kushandisa uye kumhanya zvishoma.
Yakananga-yakasanganiswa centrifuge, mhanyisa yakadzikama, isina zvachose bhandi slip, yakaputsika uye hombe ruzha mibvunzo.
• 100% yemhangura-waya mota ine rinorema cast iron kabati, kutanga uye kumhanya mushe.
• Zvakatsva zvinhu nyowani PP epurasitiki kabhineti, kupesana nekukwegura, anti UV, kusamboita ngura, hupenyu hwakareba duration.
Nehupamhi hwepamusoro 5090 # kutonhora pad (100mm), yakanaka mhedzisiro yekudzikira uye kudzikisira tembiricha, nyore kuchenesa, kumucheto kusunga kunodzivirirwa uye kunogara.
• Yakavhurika-mhando yakaoma mvura pombi pamwe chete nekuparadzirwa kwemvura system inovimbisa kumwaya mvura zvakaenzana uye zvakatsetseka.
XK-20S / pasi
XK-20S / kudivi
XK-20S / kumusoro
Pasuru: plastiki firimu + pallet + katoni
Kushanda: XK-20S mbeveve maindasitiri centrifugal mvura evaporative mweya inotonhorera ine kutonhora, humidification, kuchenesa, simba kuponesa mamwe mabasa, pamwe ne mbeveve mhedzisiro, yakanyanya kushandiswa kumusangano, purazi, imba yekuchengetera, girinihausi, chiteshi, musika uye dzimwe nzvimbo.
Pashure: Nyowani 12cm ukobvu inotonhorera padiki maindasitiri emhepo inotonhorera XK-18/23 / ST
Zvadaro: nyowani yakakwidziridzwa duct kutonhora system maindasitiri emhepo inotonhorera XK-25H
Kutonhora Mhepo Inotonhora
Chinotakurika Mhepo Inotonhorera
Stainless simbi guru centrifugal maindasitiri mhepo ...